Medjugorje: nwere onwe ya site na ogwu, ugbu a obu onye nchu aja | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Obi dị m ụtọ ma ọ bụrụhaala na m nwere ike ịgbara gị niile gbasara "mbilite n'ọnwụ" nke ndụ m. Ọtụtụ oge, mgbe anyị n’ekwu maka Jizọs dị ndụ, Jizọs onye enwere ike imetụ aka anyị aka, onye gbanwere ndụ anyị, obi anyị ga-adị ka ọ tere aka, n’igwe ojii, mana a ga m agba ama na enwego m ihe a niile na nke ahụ ahụkwara na ndụ nke ọtụtụ, ọtụtụ ndị na-eto eto. Ebiri m ogologo oge, ihe dịka afọ 10, onye mkpọrọ nke ọgwụ ọjọọ, na naanị ya, na-emekpa ahụ, na-emikpu onwe ya n'ime ihe ọjọọ. Amalitere m ịjuụ wii wii mgbe m dị afọ iri na ise. Ihe a malitere site na nnupụisi m megide ihe niile na onye ọ bụla, site na egwu m na-ege ntị na-akpali m ka m nwee nnwere onwe na-ezighi ezi, amalitere m ịme nkwonkwo oge ọ bụla, mgbe ahụ agafere m heroin, n'ikpeazụ gaa agịga! Mgbe m gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, ebe m na-agụghị akwụkwọ na Varazdin, Croatia, agara m Germany na-enweghị ebum n’uche. Amalitere m ibi na Frankfurt ebe m rụrụ ọrụ dị ka onye na-edo blọkụ, mana enweghị m afọ ojuju, achọrọ m karịa, achọrọ m ịbụ mmadụ, inwe nnukwu ego. Amalitere m ịlụ heroin. Ego malitere ijuju n'akpa m, m na-ebi ndụ klaasị, enwere m ihe niile: ụgbọ ala, ụmụ agbọghọ, oge dị mma - nrọ America oge ochie.
Ka ọ dị ugbu a, heroine ahụ na-ejide m karịa ma kpalie m ala na ala, na-aga n'ime abis. Emeela m ọtụtụ ihe maka ego, ezu m ohi, gha ụgha, aghụghọ. N'afọ gara aga m nọrọ na Germany, ebiri m n'ụzọ nkịtị n'okporo ámá, hie n'ụgbọ okporo ígwè, gbanahụ ndị uwe ojii, ndị na-achọgharị m ugbu a. Agụụ na-agụ m, abanye m n'ụlọ ahịa, jide achịcha na salami wee rie mgbe m na-agba. Gwa gị na ọ dịghị onye na-akpachara anya gbochiri m izu ezu iji mee ka ị ghọta ihe m nwere ike ịdị. Adị m naanị afọ 25, mana ike gwụrụ m nke ndụ, na ndụ m, naanị ihe m chọrọ bụ ịnwụ. Na 1994 agbapụrụ m na Germany, alaghachiri m Croatia, ndị mụrụ m hụrụ m n'ọnọdụ ndị a. Brothersmụnne m nyeere m aka ozugbo ịbanye n’obodo, na mbụ na Ugljane na Sinji na emesịa na Medjugorje. Mụ onwe m, ebe ike gwụrụ m ihe niile ma achọrọ m izu ike, batara, na atụmatụ m niile gbasara mgbe m ga-apụ.
Agaghị m echezọ ụbọchị mgbe mbụ m zutere mama Elvira: Enwere m ọnwa atọ nke obodo ma m nọ na Medjugorje. Mgbe ọ na-agwa anyị ụmụ nwoke n’ụlọ ụka ekpere, ọ jụrụ anyị ajụjụ a na mberede: "younye n’ime unu chọrọ ịbụ ezigbo nwa nwoke?" Ndi nile gbara m gburugburu welie aka ha n’ọ joyụ n ’anya ha. Kama iwere m iwe, iwe, enweela m atụmatụ m n’uche na enweghị ihe ọ bụla metụtara ịdị mma. N’abalị ahụ, abaghị m ehi ụra, enwere m nnukwu ibu n’ime m, echetara m na m bere ákwá na ime ụlọ ịwụ na n'ụtụtụ, n’oge ekpere chaplet, Aghọtara m na m chọrọ ịdị mma. Mụọ nke Onye-nwe metụrụ m n’obi nke ukwuu, n’ihi okwu ndị ahụ dị mfe nne mama Elvira kwuru. Na nmalite nke njem ime obodo m tara ahụhụ nke ukwuu n'ihi mpako m, achọghị m ịnakwere ịbụ ọdịda.
Otu mgbede, na ukpa Ugljane, mgbe m kwuchara ọtụtụ ụgha banyere ndụ m gara aga ka ọ dị iche karịa nke m bụ n'ezie, na mgbu m ghọtara etu o siri banye ọbara m, biri ọtụtụ afọ n'ụwa ọgwụ. Aghọtawo m na m amataghị mgbe m na-ekwu eziokwu na mgbe m na-agha ụgha! Na oge mbụ na ndụ m, n'agbanyeghị ihe isi ike, m wedara mpako m, rịọ ụmụnna m mgbaghara na ozugbo m nwetasịrị ọ joyụ dị ukwuu na m tọhapụ onwe m n'ihe ọjọọ. Ndị nke ọzọ ekpeghị m ikpe, na Kama nke ahụ, ha hụrụ m n'anya karịa; Enwere m agụụ "agụụ" maka oge nnwere onwe na ọgwụgwọ a, amalitekwara m ibili n'abalị iji kpee ekpere, ịrịọ Jizọs maka ike iji merie ụjọ m, mana kachasị nye m obi ike iji soro ndị ọzọ kerịta ịda ogbenye m, otumi ma obi nko ara. N’ebe ahu Jisos Onyebu Kraist eziokwu bidoro n’uzo m: nnukwu nnonye icho iche, ibu enyi nke Jisos .. N’ebe a ka ahuru m dika onyinye amara, nke mara nma, ma obu nma, ma nwekwaa idi nma; M gbalịsiri ike ịnabata ụmụnna dị ka ha, site na adịghị ike ha, ịnabata ha n'udo ma gbaghara ha. Kwa Abalị ọ bụla, m na-arịọ Jizọs ka ọ kụziere m ka m hụ onwe ya n'anya.
Ebiri m ọtụtụ afọ na Community nke Livorno, na Tuscany, ebe ahụ, n'ụlọ ahụ, enwere m ohere iji zute Jizọs ọtụtụ oge ma banye n'ime ihe ọmụma banyere onwe m. N’oge ahụ, nke ọzọ, ata m ahụhụ nke ukwuu: ụmụnne m, ụmụ nwanne nne m, ndị enyi m nọ na agha, amam m ikpe maka ihe niile m mere ezinaụlọ m, maka ahụhụ niile kpatara, maka na m nọ n'obodo na Ha n’agha. Na mgbakwunye, nne m dara ọrịa n’oge ahụ ma rịọ m ka m laa n’ụlọ. Ọ bụ nhọrọ siri ike mgba, amaara m ihe nne m na-agabiga, mana n’otu oge ahụ m matara na ịpụ n’obodo ahụ ga-abụrị m ihe ize ndụ, ọ bụ mbido oge mbụ na m ga-abụrụ ndị mụrụ m nnukwu ibu. Ekpere m ekpere ogologo abalị niile, arịọrọ m Chineke ka o mee ka nne m mata na abụghị m naanị, kamakwa ụmụ nwoke mụ na ha bi. Onyenwe anyị rụrụ ọrụ ebube ahụ, nne m ghọtara ya ma taa ya na ezinụlọ m niile nwere obi ụtọ maka nhọrọ m.
Mgbe afọ anọ nke obodo gasịrị, oge eruola ikpebi ihe m ga-eji ndụ m mee. Enwere m mmetụta na m hụrụ n'anya karị na Chineke, ndụ, na ndị obodo, mụ na ụmụ nwoke ndị mụ na ha nọkọrọ. Na mbido, m chere echiche ịmụ gbasara akparamaagwa, mana ka m na-erute ọmụmụ ihe ndị a, ka egwu m na-atụwanye, ọ dị m mkpa ịga na ntọala, na mkpa ndụ. Ekpebiri m ịmụ maka nkà mmụta okpukpe, ụjọ m niile na - apụ n'anya, enwere m mmetụta na m ekele karịa ndị Community, nye Chukwu maka oge niile ọ bịara izute m, maka ịdọpụ m na ọnwụ wee bulite m, maka ime ka m dị ọcha, yiwe m uwe. maka ime ka m yie akwa oriri. Ka m na-aga n’ihu n’ihe ọmụmụ m, ka a na-akpọkwu oku ’doro anya, sie ike, gbanye mkpọrọgwụ n’ime m: Achọrọ m ịbụ ụkọchukwu! Achọrọ m inyefe ndụ m nye Onye-nwe, ijere Nzukọ-nsọ ​​n’ime ụlọ nke ime ụlọ elu elu, iji nyere ụmụ nwoke aka aka. Na July 17, 2004 A họpụtara m ịbụ ụkọchukwu.
Ozi nke Nwanyị Nwanyị nke Medjugorje: Eprel 17, 2021
Ozi nne anyi di aso nke Medjugorje maka Ista
Medjugorje: onye ọhụụ Mirjana na ekpughere ihe di na parch nke nne anyi di aso nyere ya
Ozi e nyere na Medjugorje: Machị 28, 2021
Ozi nke nne anyi di aso na Medjugorje: Mach 23, 2021
Ozi nke Nwanyị Nwanyị nke Medjugorje: Machị 22, 2021